Ngathi | Yongkang Jiahao Isixhobo Co, Ltd.
Yongkang Jiahao Icandelo loShishino kunye noRhwebo, Ltd. esekwe kwi-1995, egxila kwimveliso yezixhobo zamandla, ezinje ngesando se-petroli, i-peteroline picks, umqhubi we-petroli, i-petroli ye-angle grinder, i-petroli yomhlaba auger, isitshixo sefuthe le-petroli, i-petroli yomsiki womthi, izando zokudilizwa kombane kunye ne-drill. Inkampani yingqokelela ye-R & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa njengenye. Inkampani ibhalise ikomkhulu lezigidi ze-yuan ezi-2, ezigubungela indawo emalunga ne-10,000 yeemitha zesikwere, kwaye inabasebenzi abangaphezulu kwe-130. Ngaphezulu kwe-70% yezincedisi zenziwe zodwa. Ukuveliswa kobungcali kunye nomgangatho ogqwesileyo kwenza ukuba ixabiso leemveliso likhuphisane kakhulu kwintengiso.
Ngobuchwephesha obuphambili, ulawulo olugqibeleleyo, umgangatho onokuthenjwa kunye nexabiso elifanelekileyo, inkampani ikhule ngokukhawuleza. Ayisiyentengiso yasekhaya kuphela eqhubeka ngokuthe ngcembe, kodwa neemveliso zithunyelwa kurhwebo lwangaphandle. Iimveliso ikakhulu zithunyelwa eYurophu, eMelika, mpuma Asia kunye nakuMbindi Mpuma. Ke inkampani yethu ikwafumene indumiso eninzi kubathengi.
Inkampani izimisele kuphuhliso kunye nokwenziwa kwamashishini amatsha ngenjongo "yokuthenga ngetyala kuqala, umThengi kuqala". Iimveliso zidlulisile iCCC, i-CE, isatifikethi se-GS kunye nothotho lwezinye iziqinisekiso. Inkampani iye yathumela iqela loyilo, amandla ekhokelela kumzi-mveliso we-R & D kunye namandla okomelela okuvelisa, imveliso inembonakalo entle kwaye iyaziva, kwaye ihlala ilandela iindlela ezikhoyo zefashoni, ezikumgangatho ophezulu, ezaziwa kwihlabathi liphela, phakathi kwazo i-JH168, JH150, JH4350, I-JH32A kunye ne-JH28A kwaye uninzi lweemveliso zepetroli zonke ziyilwe ngumzi mveliso ngokwawo. Ngeephatheni zabo ezizodwa zokubamba kunye noyilo lwenoveli